Fampahalalam-baovao Isiraeliana Voatsikera Tamin’ny Fomba Fitantarany Ny Ady Tao Gaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Novambra 2012 13:49 GMT
Voatatitra tsy an-kiato ao anatin'ny ora hitrangany ny vaovao momba ny fizotry ny ady teo amin'i Israely sy ireo mpikatroka ao Gaza. Mandray ny fomba fitantaran'ny governemanta sy ny fiarovantenany amin'ny fanafihana ataony ireo fampahalalam-baovao. Ireo bilaogera sy mpiserasera Isiraeliana ankavia izay mitsikera ny governemanta nandritra ny fanafihana, dia namely ihany koa ireo izay hitany fa mamoaka vaovao mitongilana nandritra ny fanafihana.
Mpisera Twitter ankavia, Uri Horesh, namely manokana ilay mpanao gazety tao amin'ny Jerusalem Post izay notendrena hamoaka lahatsotra momba ny fijalian'ireo biby fiompy ao Atsimon'i Isiraely. Ity ny sombiny tamin'ny fifanakalozan-dresaka teo amin'izy ireo:
‏@sharonudasin: Iza no manana biby fiompy izay mitaintaina rehefa misy feon'anjomara? Raha misy izany, ilazao aho androany azafady mba hanaovako lahatsoratra. Misaotra! #jpost
@urihoresh: @sharonudasin Manoratra ho an'ny The Onion [gazety mpanebaka ao Etazonia] ve ianao?
‏@sharonudasin: @urihoresh tsia, miahiahy tanteraka ireo tompon'alika sy saka ao atsimon'i Isiraely!
@urihoresh: .@sharonudasin Novonoina ireo ankizy kely tao #Gaza, ary hanao lahatsoratra fanadihadiana momba ny alika kely ao Ashdod izay matahotra anjomara ny Jerusalem Post. Ok.
Miaramila miasa ao amin'ny fahitalavitra Channel 2, Roni Daniel, no tena notsikerain'ireo ankavia mafy izay sokajian'izy ireo ho mpankasitraka ady. Mpanao gazety Alexandra Belopolsky nanoratra tao amin'ny bilaoginy Saloona [heb]:
“Izao no fotoana hampitsaharana ny tifitra tsara kinendry,” hoy i Daniel tamin'ny feo mety amin'ny radio sy manampahefana satria miezaka “hampianatra” ny tafika Isiraeliana (IDF) amin'ny zavatra tokony ataony izy. “Izao no fotoana hamoahana ny kanonta mavesatra. Indraindray misy ny fotoana mila manao zavatra henjana sy mahery setra isika.” Ao anatin'ny fironam-pitiavan-tanindrazana tsy misy fepetra nameno ny fahitalavitra tao anatin'izay andro vitsy lasa izay dia tsy mampiontana izany fehezanteny izany. Ary noho izany indrindra no tsy tokony anaovana azy ho zava-maivana. Tsy tokony ekentsika ny hoe mpanao gazety fanta-daza, izay tokony hanome vaovao sy fanadihadiana ho an'ny mpanaraka indray no miantso ankarihary ny miaramila hanao herisetra amin'ny olo-tsotra.
Bilaogera mpitarika ankavia Yossi Gurvitz nisioka hoe:
Nihemotra roa-polo taona ny fampahalalam-baovao Isiraeliana amin'ny fomba fitantaran'izy ireo ny vaovaon'ny zava-nitranga tao Gaza, niverina tany amin'ny vanim-potoanan'ny Hetsika Famaizana raha mbola nanao ho mpitondratenin'ny rafitra ara-miaramila izy ireo.
Mamakafaka ny fifampitambaran'ny tompon'andraikitry ny fifandraisan'ny IDF (tafika isiraelianina) sy ny fampahalalam-baovao Isiraeliana i Daniel Argo sy Shiri Eiram raha nanoratra tao amin'ny bilaogin'ny fanaraha-mason'ny fampahalalam-baovao Keshev [heb]:
Nandritra ireo ady teo aloha, ny tafika Isiraeliana (IDF) no “mamahana” ireo miaramila mifanoratra (amin'ny mpanao gazety) sy manome horonantsary sy vaovao any an'ady any amin'ireo fampahalalam-baovao. Kirakirain'ny fampahalalam-baovao araka izay mety izany fitaovana izany, ary avoakan'izy ireo izay mifanaraka amin'ny zavatra famoakany. Izany hoe – mila mpanao gazety ny IDF tahaka ny ilàn'ny mpanao gazety vaovao avy amin'ny IDF. Kanefa nisy zavatra niova amin'izao hetsika ankehitriny izao… Noho ny fomba amelana ny IDF hany mpamoaka ny vaovaony, no sady hany manana ny ankamaroam-baovao, dia lasa tsy mety ny fomba famoahana ny vaovao. Misy anjara fahadisoan'ny fampahalalam-baovao Isiraeliana izany amin'ny fisafidianana ny fanambaran'ny mpitondratenin’ ny IDF tsy misy fanamarinana sady tsy misy fanontaniana. Fehiny, ny mpanao gazety no tsy maintsy manaraka ny fitsipika momba ny asa fanaovan-gazety sy ny fitsipi-pitondrantena. Etsy andaniny,ny adidin'ny mpitondratenin'ny tafika, na mora adinoina aza matetika, dia tsy mankany amin'ny marina fa mankany amin'izay kinendrin'ny tafika.